Booliska Phillippine oo Si yaab leh u dilay Duq magaalo oo daroogada ka ganacsan jiray | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Booliska Phillippine oo Si yaab leh u dilay Duq magaalo oo...
Booliska Phillippine oo Si yaab leh u dilay Duq magaalo oo daroogada ka ganacsan jiray
Booliska Dalka Phillippine,ayaa toogtay Reynaldo Parojinog oo ahaa Duqii Magaalada Ozamiz ee dalkaasi kaddib markii lagu weeraray gurigiisa xilli aroor hore ah.
Dadka dhintay waxaa ka mid ah Xaaska Duqa la dilay iyo 10 Qof oo kale,waxaana Booliska ay fulinayeen howlgal ka dhan ah kaganacsiga Daroogada iyaga oo Guriga Guddoomiyaha Magaalada kedis ku galay.
Booliska ayaa helay xogta ah in Guddoomiyaha Magaalada ee la dilay uu si qarsoodi ah uga ganacsado darooga waxaana lagu qaaday weerar gaadmo ah oo ay booliska ka fuliyeen gurigiisa.
Madaxweynaha Dalka Philippine,Rodrigo Duterte ayaa markii uu ku guuleystay doorashada ballanq aaday in uu dalkaas ka cirib tirayo daroogada dadka ka ganacsadana tooganayo xitaa haddii ay dowladda ku jiraan,waxaana muuqata in tii ay dhabowday.
Booliska dalkaas ayaa dilay 3,200 Qof tan iyo June 2016kii, kaddib howlgallo ka dhan ah dadka Daroogada ka gacansada oo ay ka fuliyeen dalkaas,waxaana amarkaas bixiyay Madaxweynaha Dalka Philippines Rodrigo Duterte.
Duqa Magaalada ee la dilay waxaa uu ka mid ahaa 160, oo uu Madaxweynaha horay ugu eedeeyay in ay Daroogada ka ganacsadaan sharcigana wajihi doonaan,waxaana horay loo dilay intooda badan,halka kuwo kalena ay dalka ka carareen.
Bishii Novemver ee Sanadkii 2016kii Booliska ayaa toogtay duqii Magaalada Albuera,Rolando Espinosa oo isna fal la mid ah kan loo heystay,todobaad ka hor dhacdadaa waxaa isna Booliska ay dileen Samsudin Dimaukon oo ahaa Duqii magaalada Saudi Ampatuan.